ISpy nguKyle (kunye noLil Yachty) - Okunye
ISpy nguKyle (kunye noLil Yachty)
Umzobi wase West Coast uKyle usebenzisana nomthonyama waseAtlanta u-Lil Yachty kule ngoma imnandi kunye namazwi e-screwball malunga ne-vibes elungileyo kunye nobomi obuphilayo ngokupheleleyo. UKyle uphawule Ubuchule :
Sobabini sinamazwi ahlukileyo naphakamisayo kunye nemiyalezo iyonke. Kwiingoma zam ndiyathanda ukuthi izakulunga. Ilizwi likaLil Boat lenza ukuba kuvakale ngathi yonke into izakulunga- kuvakala ngathi nguBob Ross okanye enye into. '
Ingoma iqala ngeLil Boat enika uKyle intetho ye-pep yokungahoyi izithiyi kwaye ujolise kwizinto ezintle ebomini. UKyle uthe:
Sobabini sasifuna ukwenza isingeniso sokwenene se-cinema. Sobabini sithetha ii-intros kwi-mixtapes yethu. Bendifuna ukusibona sisenza kunye oko. Siyikhulule ngokukhululekileyo-eneneni kukho isithambiso esithathayo esingakhange singene apho. '
UKyle uxoxa ngamaqhinga okukhangela amantombazana kwi-Instagram:
Ndihlola iliso lam elincinane
Intombazana endinayo ndingayifumana kuba ayithandi ukuthandwa kakhulu
I-cutie ene-curly-curly ndingaba ngumfazi wam
Lindela, oko kuthetha ngonaphakade, nanini, ubambe, ungaze ucinge
Rapper yase West Coast icacisile:
'Ukho kwiphepha lokuhlola le-Instagram kwaye ubona onke la mantombazana-uyabona ke bathande izigidi ezi-2 zokuthanda ifoto nganye kunye nezimvo eziyi-100,000. Ucinga ukuba uza kuyityibilika njani ingxelo yakho apho kwaye ukhwaze?
Amantombazana angafumanekiyo kwi-Instagram yeyona nto ndiyithandayo, kwaye anezixhobo ezonyuselweyo, kuba baneqela le-intanethi.
Xa ubona ii-shawtys kwi-Instagram ezifumana nje ukuthanda okungama-200, yidayimani erhabaxa. Intetho yokwenyani, ifana negolide.
I-1 000 ukuya kuma-3 000 yokuthandwa ilungile, kodwa indawo ekuthandwayo engama-200 ukuya kuma-300 ukuya kuma-400, oko kuthetha ukuba yeyona mfihlo igcinwe kakuhle kwaye awufuni ukubonisa nabahlobo bakho. '
I-rap yase West Coast ngumculi wokuqala ongumntu ogama linguKyle owake wenza i-Hot 100 kwimbali yetshathi. Ezinye iimvumi ezibizwa ngokuba nguKyle zibandakanya isiginci seMatchbox Twenty uKyle Cook, imvumi ye-jazz uKyle Eastwood, u-View View uKyle Falconer, umlingisi webhodi yezitshixo ye-String Cheese Kyle Hollingsworth, umbhali wengoma yelizwe uKyle Jacobs kunye noMlindi wobumnyama uKyle Nicolaides.
Isingeniso sokuqala sikaKyle kuLil Yachty safika xa umlobi waseAtlanta wabuza kwi-tweet ukuba ngubani omele alwe naye kwaye abaninzi baphendula bathi, 'Kuya kufuneka ulwe noKyle.'
'Ayizange yenzeke loo nto, kodwa yindlela esidibene ngayo saza saqala ukuthetha, utshilo uKyle Ibhilibhodi kwiphephancwadi. 'Emva koko, ndandisenza' iSpy 'kunye [nomvelisi] u-Ayo kwaye sasifuna ukwenza into evakala ilungile kwaye ingumngcwabo. Ndijongene neTimed [Lil Yachty] wayiva ingoma kwaye kwimizuzwana emibini wayefana, 'Ewe ndiphantsi.'
Uye wathi uzakubakhona kwimizuzu engama-30 kwaye emva kweeyure ezintathu wabonakala, kodwa ayinamsebenzi, utshilo uKyle. 'Uzibonakalisile wabhala iivesi zakhe kumzuzwana owahlulileyo kwaye yayingenasiphako.'
Ividiyo ekhokelwa nguColin Tilley ifumana uKyle kunye noLil Yachty baxutywa kwiintsana zeCGI bexhomeke kubantwana abashushu beebikini elunxwemeni. Ummemezeli wonxweme lwaseNtshona unombulelo kumlawuli ngokuzisa umbono wakhe wonxweme. Ndamxelela, 'Le ngoma imnandi. Ividiyo kufuneka iphindaphindwe kabini ukonwaba. Masize nemeko evuyayo, utshilo Fader . 'Ayiziva ilunge ngakumbi kunokuba usana olujikelezwe ngabafazi abahlelelekileyo elunxwemeni ngaphandle kokukhathazeka emhlabeni.'
Ngesinye isikhathi, uKyle udlala ipiyano yokudlala phambi kwe-mermaid enhle ephethe i-fin. Ummemezeli uthe bekusoloko kuyiphupha lakhe ukuba ahlukane ne-mermaid entle. Xa ndandisemncinci elunxwemeni, ndandifana, 'Oku kukhanyisiwe kodwa ukuba bendinosana olungelolwam kunye nam, ubomi buya kuba lishumi ngokulungileyo, utshilo uKyle.
Iingoma zikaDa Da Da ngoTrio
Super Freak nguRick James
Iingoma zokuThutha kunye nokuKhwaza nguBeatles
Iingoma zoNcedo! IiBeatles
Iingoma zeWonderwall ngu-Oasis
Iingoma ngolunye usuku nguMichael Bublé
Uhamba njengeJagger nguMaroon 5 (kunye noChristina Aguilera)
Ngendlela oyiyo nguBilly Joel
Iingoma zokuba sihlala kunye nguDiana Ross
Iingoma zeHush by Deep Purple
Iingoma zaseMelika nguRammstein
Iingoma zazo zonke Uxolo nguNirvana
Iingoma zeO! Darling yiBeatles
Akukho kuphumla kwabangendawo lyrics
ndiyindoda ewe ndinjalo
unamehlo esibhakabhaka esiluhlaza
rem le iphuma ndiye kulowo ndimthandayo
Intsimbi yentsimbi ikhaliphile ikhava yelizwe elitsha
ingenzeka njani lento kum lyrics
I-tarot enkulu ye-arcana intsingiselo